Shamarree walgahiirratti hirmaachuuf bishaanirra imalaa jirtu - BBC News Afaan Oromoo
Shamarree walgahiirratti hirmaachuuf bishaanirra imalaa jirtu
Goodayyaa suuraa Shamarree Taanberg walgahii jijjiirama UN irratti hirmaachuuf torbee lama bishaan irra imalte
Falmattuun jijjiirama haala qilleensaa namoonni jijjiirama haala qilleensaarratti dargaggoota "aarsuu" dhiisuu qabu jette.
Rogeettiin jijjiirama haala qilleensaa Taanberg walgahii jijjirama Dhaabbata Biyyoota Gamtoomani irratti hirmaachuuf imalli taasifte torban lama jalaa fudhateera.
Kunis waan bishaanirra imalteefi. Iddoon ka'uumsa ishee Varjiiniyaa, US yoo ta'u garba Atilaantikii qaxxaamuruun Poorchugaal magaalaa Lisbaan'tti argamuun dubbii taasiftee jirti.
"Namoonni aarii dargaggootaa tuffachaa jiru," jechuun gaazexeessitootaatti himtee jirti.
Shamarreen ganna 16 walgahii haala qilleensaa 'COP25' jedhamu kan magaalaa Maadriiditti taasifamuuf jedhurratti hirmachuuf imalarra jirti.
Isheenis ejjannoo xiyyaaraan yookiin konkolaataan imaluurra bishaan irra imaluu woyya jedhu qabattee imalaa jirti.
Gaaffii gaazexeessitootarraa ka'eef yoo deebii kennitu namoonni tokko tokko akka isheen "aartetti" ilaalani. Shamarree Taanberg akka jette: "Nuti aarree jirra, soddaannes jira kuni sababoota gahaa qabna. Akka nuti hin aarre yoo barbaaddan, nu aarsuu dhiisuu qabu."
Itoophiyaan guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 350 dhaabuun ‘riikardii cabsite’
''Jijjiiramni qilleensaa yaaddoo namoomaa isa hamaadha''
Jalqaba irratti US irraa ka'uun gara walgahii haala qilleensaa UN Chiiliitti imaluuf kaayyeeffattee ture.
Ta'us garuu biyyoonni Ameerikaa Kibbaa sababa jeequmsa biyya keessatiin abdii murataniiru.
Kanaaf iddoosaa gara Ispeeniitti jijjiirame.
Isheenis lammii Awustiraaliiyaa Rileey Wiitlum fi Elaayinaa Karaasu kan 'YouTube' irratti hojjataniifi Biriitoon Nikkii Heendarsan- ogeessa doonii waliin ta'uu imalte.
Dooniin isaanii sochiif ifa aduufi humna bishaanii fayyadamti. Ta'us garuu dhiibbaan qilleensi gubataa doonicha keesssa bahu kun gaaffii kaasaa jira.
Gabaasni gaafa Kibxata yeroo walgahii COP25 bahe akka ibsutti, Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) akka jedhetti biyyoonni dhiibbaan jijjiirama qilleensaa fayyaarratti fiduu dursa kennuu qabu jedha.
Waggoota kudhan dhufan keessatti jijjiirramni haala qilleensa du'a namoota kumaatamatti lakkaa'amaniif sababa akka ta'u eeggama. Kunis nyaata madaalawaa dhabuun, dhukkuba ilbiisotaan dhufuufi dhiphuurraati.
Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa biyyoonni 101 kan tarsiimoo fayyaafi jijjiirama haala qilleensaa qabaniifi isas hojiirra oolchuuf maallaqa gahaa akka qaban qorannoo gaggeessaa jira.
Biyyoonni walakkaa ta'an tarsiimoo biyyaalessaa akka qaban beekkameera.
Ta'us garuu biyyoonni 45 ta'an qorannoo jabaa akka gaggeessan yoo godhaman %40 gad immoo tarsiimoo fayyaasaanii guutummatti yookiin walakkaadhaan akka karooraa biyyaalessaatti qabataniiru. %9 immoo tarsiimoo isaanii hundaaf qabeenya gaha ramadaniiru.
'Jijjiirra qilleensaa''n balaa dhufurraa adduunyaa baraaruuf waamicha ijibbaata godhame
Jijjiirama qilleensaa: ''Addunyaan daandii qaxxaamuraarra jirti''